“Nadaafada, dhiraynta magaalada, iyo dhismaha wadooyinka ayaa noo qorshaysan” Duqa magaalada Bossaso. – Radio Daljir
Agoosto 23, 2011 12:00 b 0
Bossaso, Aug 23 – Duqa magaalada Bossaso Xasan Cabdulle Xasan ayaa tafaasiil ka bixiyey qorshe hawleedka siyaasaeed ee uu damacsan yahay in uu ka hawlgeliyo magaalada Bossaso oo 16-kii bishan loo doortay Duqa magaalada.
Md. Xasan waxaa uu sheegay in uu damacsan yahay hirgeinta 3 mashruuc oo kala ah sare u qaadiada nadaafadda iyo bilicda magaalada, dhiraynta magaalada, iyo bannaynta wadooyinka.
Md. Xasan oo waxaa uu ka dayriyey nadaafada magaalada oo uu sheegay in ay aad u hoosayso, una baahan tahay in si deg deg ah wax looga qabto, isna uu mudnaanta koowaad siin doon.
Maaraynta iyo guridda qashinka oo uu sheegay in ay aad u liidato, hoos u dhac weyna ay ku keentay bilicda magaalada ayaa uu u xusay in ay ugu horayn culayska saari doonaan; qashinka oo aan la gurin, lana fogayn ayaa uu sheegay in uu caafimaadka guud ee bulshada uu si xun u saameeyo.
Dhiraynta magaalada iyo bannaynta wadooyinka ayaa uu sheegay in uu sidoo kale siin doono ahmiyad gaar ah.
Waxaa uu soo qaatay 3 waddo oo uu sheegay in la bannayn doono:
i) Wadada isku xirta Gaaca iyo madaarka Bander Qaasim oo dhererkeedu le’eg yahay 1.4km,
ii) Wadada Netco illaa iyo madaxtooyada Bossaso, iyo
iii) Wadada Shaaric-lubaan oo dhan 1.2km.
Adkaynta amniga iyo xoojinta ciidanka amniga ee magaalada ayaa sidoo kale uu sheegay in uu wax ka qaban doono.
Midawga Afrika oo berrito oo khamiis ah shir ku yeelanaya Addis-ababa, kana hadli doona abaaraha Geeska Afrika.
Baahin: Isniin, Aug 22, Weriye Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Markab sida xoolo nool oo dhan 4,463 oo neef oo dab ku qabsaday agagaarka Buruc & Bacaad ee duleedka Bossaso; Shirka Guddiga Wadajirka ah ee Amniga ee TFG-da, AMISOM & UN-ta oo ka furmay Muqdisho; Warbixin ku saabsan shir aaya-ka-talineed oo la filayo in uu ka furmo Buuhoodle, Cayn.